The iPhone SE na iPad Pro 9,7 ", OS X 10.11.4 na iOS 9.3, isi okwu nke Machị 21 na ọtụtụ ndị ọzọ. Kachasị mma nke izu na m si Mac | Esi m Mac
The iPhone SE na iPad Pro 9,7 ″, OS X 10.11.4 na iOS 9.3, isi okwu nke March 21 na ọtụtụ ndị ọzọ. Best nke izu na m si Mac
Miguel Angel Juncos | | Apple, Mac OS X, Noticias, Ngwaahịa Apple
Ekele dịrị m isi okwu nke Mọnde gara aga, Machị 21, Anyị nwere otu izu jupụtara na ozi ọma ma n'ihe banyere ngwanrọ na mbata nke OS X 10.11.4 na iOS 9.3 na ngwaike na ngosi nke ọhụrụ 9,7 ″ iPad Pro na iPhone SE. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịlele ihe ngosi maka onwe gị, ọ dịlarị na vidiyo site na YouTube na site na nke Anyị na-agwa gị okwu na post a.
Agbanyeghị, ọ bụghị ihe niile abụla ozi ọma, ebe ọ bụ na mgbe ngosi ahụ gasịrị, ndị ọrụ dị njikere iji melite akụrụngwa ha, nwere nsogbu mgbe ha banyere. Izi ozi na akaụntụ FaceTime na OS X 10.11.4 na kwa ebighị ebighị iOS 9.3 na ngwaọrụ ndị okenye, nke mere na a manyere Apple iwepụ mmelite maka nwa oge maka ngwaọrụ ndị ahụ.
N'agbanyeghị nke ahụ, anyị nwere ike ịhụ ozi ọma dị elu nke ndị ọrụ dịka nchekwa okwuntughe na ngwa ndetu ya na ndakọrịta ya na Evernote yana ndozi ndozi ndị ọzọ na ndozi dị ka okuku nke kpatara iwepu ngwaọrụ USB ọdịyo ma ọ bụ mmezi na ndakọrịta nke Apple USB-C multiport nkwụnye.
Na mgbakwunye na mmelite nke iOS na OS X dị ka sistemụ arụmọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ, emelitere ha abụọ. watchOS na mbipute 2.2 na tvOS 9.2 na-ekwe omume nke na-eke nchekwa ma na-edegharị ha ọzọ na-amasị anyị dị ka m kwuru ke ibuotikọ emi dị ka a nkuzi.
Mgbe edere akwụkwọ akụkọ ndị a niile, asịrị gbasara a ọhụrụ 12 ″ MacBook nlereanya nwere nkọwa akọwapụtara ọ bụ ezie idebe otu imewe nke m na-ahụta dị egwu.
Ruo ugbu a nchịkọta nke izu nke ihe m hụrụ kachasị dị iche na nke Apple kwupụtara, ruo izu na-abịa. Sundaybọchị Sunday !.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » The iPhone SE na iPad Pro 9,7 ″, OS X 10.11.4 na iOS 9.3, isi okwu nke March 21 na ọtụtụ ndị ọzọ. Best nke izu na m si Mac
IKEA Planner maka Mac
Steve Wozniak: Apple abụghịzi ụlọ ọrụ ọ na-adịbu